Waqooyiga Kuuriya oo soo bandhigay gantaalo caalamka ku cusub – Hornafrik Media Network
Welwelka ay xukuumada Donald Trump ka qabto dalka waqooyiga Kuuriya ayaa sii badanaya kedib markii ay ku guuleysteen tijaabadii gantaalada balaastikada ah ee ay sameeyeen maalintii talaadada aheyd.
Mareykanku wuxuu cadaadis saarayaa dalalka cilaaqaadka ganacsi la leh waqooyiga Kuuriya iyadoo bishii April dalka China lagu qasbay inay joojiso dhuxusha ay ka iibiso dalkaasi laakin taa bedelkeeda China ayaa kordhisay 40% badeecooyinka kale ee ay ganacsi ahaan u dhoofiso waqooyiga Kuuriya.
Gantaalka cusub oo ay tijaabiyeen waqooyiga Kuuriya ayaa muujinaya awooddooda militari inay xoogan tahay kedib markii Mareykanka qudhiisu qiray maalintii Arbacada aheyd in gantaalkan cusubi uu yahay mid aaney horay u arkin ama u maqlin nuuciisa oo kale.
Mareykanku waxay ku andacoonayaan in hubkan culusi uu yahay mid qalqal gelinaya guud ahaan caalamka oo dhan.
Dhinaca kale hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya Kim Jun-un ayaa farriin uu marsiiyay warbaahinta dalkiisa wuxuu ku yiri sidan ” Wacaladda Mareykanka ah kuma faraxsana hadiyadda ilaah na siiyay bisha July 4-deedana waxay noo tahay sanad guuro lama ilaawaan ah”.
Waxay u muuqataa in ay sii dhimaneyso rejadii laga qabay wada xaajood ay Mareykanka iyo xulifadiisu la galaan dalka waqooyiga Kuuriya.